Toyota Aye and Sons မှ လာရောက်အားပေးမည့် မိတ်ဟောင်း၊မိတ်သ... | CarsDB
Toyota Aye and Sons မှ လာရောက်အားပေးမည့်...
Toyota Aye and Sons မှ လာရောက်အားပေးမည့် မိတ်ဟောင်း၊မိတ်သစ်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန် သော Service Discount အစီအစဉ်
Toyota Aye and Sons Service Stations များမှာ ငွေကျပ် တစ်သောင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စည်းကမ်းချက်များ ၁. ယခု online ကူပွန် သည် 2016 August ၃၁ ရက်နေ့ အထိသာ အကြုံးဝင်ပါသည်။
၂. Toyota Aye & Sons Service Stations များ တွင်သာအကျုံးဝင်ပါသည်။
၄. ကားတစ်စီး လျှင်တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅. ယခု online ကူပွန်သည် မည့်သည့် အခြား promotion အစီအစဉ်များနှင့် မှ ပူးတွဲခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၆. အနည်းဆုံး ငွေကျပ် ၃သောင်းနှင့်အထက်အသုံးပြုမှ သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၇. ယခု အစီအစဉ်ကို နေ့လည် ၁ နာရီ မှညနေ ၄ နာရီ ခွဲ အတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၈. မည်သူ မဆို Toyota Aye and Sons ၏ Service ကောင်တာတွင်
မိမိ share ထား သော ယခု post ကို ပြပြီး online ကူပွန်ကို အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ Facebook Account မရှိသော customer များလည်း ယခု post ကို မိမိ နည်းစပ်ရာ မိတ်ဆွေများ မှ တစ်ဆင့် screenshot ယူပြီး Discount အကျိုး ခံစားခွင့်ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိတ်ဆွေများလည်း ယခုpost ကို like and share လုပ်ပေးဖို့ Request ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းနံပါတ် 01-540740 နဲ့ 01-540160 ကို
Toyota Aye and Sons Service Station (1) - အမှတ် ၈၇(အေ)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ပုလဲကွန်ဒိုအနီး၊
Toyota Aye and Sons Service Station (2) -အမှတ်(၈၅) ၊မင်းဧရာလမ်းနှင့်သံလွင်လမ်းတောင့်
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်
Toyota Aye and Sons Service Stations မြားမှာ ငှကေပျြ တဈသောငျး အကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိမှာဖွဈပါတယျခငျဗြာ။
စညျးကမျးခကျြမြား ၁. ယခု online ကူပှနျ သညျ 2016 August ၃၁ ရကျနေ့ အထိသာ အကွုံးဝငျပါသညျ။
၂. Toyota Aye & Sons Service Stations မြား တှငျသာအကြုံးဝငျပါသညျ။
၄. ကားတဈစီး လြှငျတဈကွိမျသာ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
၅. ယခု online ကူပှနျသညျ မညျ့သညျ့ အခွား promotion အစီအစဉျမြားနှငျ့ မှ ပူးတှဲခံစားခှငျ့ရရှိမညျမဟုတျပါ။
၆. အနညျးဆုံး ငှကေပျြ ၃သောငျးနှငျ့အထကျအသုံးပွုမှ သာ အကြုံးဝငျပါသညျ။
၇. ယခု အစီအစဉျကို နလေ့ညျ ၁ နာရီ မှညနေ ၄ နာရီ ခှဲ အတှငျးသာ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
၈. မညျသူ မဆို Toyota Aye and Sons ၏ Service ကောငျတာတှငျ
မိမိ share ထား သော ယခု post ကို ပွပွီး online ကူပှနျကို အသုံးပွု နျိုငျပါသညျ။
မှတျခကျြ။ Facebook Account မရှိသော customer မြားလညျး ယခု post ကို မိမိ နညျးစပျရာ မိတျဆှမြေား မှ တဈဆငျ့ screenshot ယူပွီး Discount အကြိုး ခံစားခှငျ့ရယူနိုငျပါတယျခငျဗြာ။ မိတျဆှမြေားလညျး ယခုpost ကို like and share လုပျပေးဖို့ Request ပါတယျခငျဗြာ။ မင်ျဂလာရှိသောနလေ့ေးဖွဈပါစေ။
အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကို ဖုနျးနံပါတျ 01-540740 နဲ့ 01-540160 ကို
Toyota Aye and Sons Service Station (1) - အမှတျ ၈၇(အေ)၊ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျး၊ပုလဲကှနျဒိုအနီး၊
Toyota Aye and Sons Service Station (2) -အမှတျ(၈၅) ၊မငျးဧရာလမျးနှငျ့သံလှငျလမျးတောငျ့
လှိုငျသာယာမွို့နယျ ရှသေံလှငျ စကျမှုဇုနျ
Posted at: 10-08-2016 09:28 AM